ikhaya/10 Windows/Cwangcisa umshicileli omiyo Windows 10
Vangelis8. Fe bruwari 2016
Nge Windows 10 unokuseta umshicileli omiselweyo. Ukuba unomshicileli ongaphezulu kwesinye ofakiweyo, kodwa rhoqo usebenzisa enye yazo, ungacwangcisa umshicileli njengomshicileli ongagqibekanga. Ukuba ujonga kuseto, uya kubona izixhobo ezahlukeneyo phantsi kweePrinta, kodwa ayingobashicileli. Ungafumana apho umz. Microsoft ukuya PDF, Windows XPS Documentan Writer, Ifeksi kwaye ngokuqinisekileyo umshicileli wakho ofakiweyo. Ngokucwangcisa umshicileli wakho njengomshicileli ongagqibekanga, ungaprinta amaxwebhu akho ngoko nangoko ngaphandle kokukhetha umshicileli lonke ixesha. Siza kukubonisa indlela yokuseta umshicileli ongagqibekanga apha:
Ukuseta umshicileli osezantsi 10 Windows Ukutshintsha nokuseta, cofa iqhosha elinqumlayo Windows + i okanye ucofe kwiqhosha leWindows emazantsi ngasekhohlo kwaye uqhubeke izilungiselelo
Cofa apha izixhobo.
Cofa ngakumbi ngasekhohlo Iiprinta kunye nezikena
Zonke iiprinta ziyaboniswa.
Cofa kumshicileli we Umshicileli omiyo kufuneka ucofe kuyo Njengomgangatho.
Setha umshicileli ongagqibekanga ngepaneli yokulawula
Ungasebenzisa Windows 10 Umshicileli omiyo setha kwakhona ngepaneli yolawulo
Cinezela iqhosha elinqumlayo Windows + X kwaye ukhethe Iphaneli yokulawula
Xa ibonisiwe Ubungakanani iisimboli Cofa apha izixhobo kunye nomshicileli.
Cofa nge iqhosha lasekunene le mouse kwiprinta ofuna ukuyicwangcisa njengokusisiseko kwaye ukhethe i Seta njengeprinta emiselweyo
Ukuba ufuna ukushicilela into ngoku nakwixesha elizayo, umshicileli owufunayo uya kuyisebenzisa.
Cwangcisa i-bandwidth yokulayisha i-firmware (inguqulelo entsha ka-2004)
I-BitLocker: Encrypt hard drive ngaphakathi Windows 10
Guqula isantya sokucofa kabini kwi-Windows 10
Bonisa izithonjana endaweni ye icon ngaphakathi Windows 10
Khuphela kwaye ufake Windows 10 - ngaphandle kwesiXhobo seNdalo seMedia
I-Bluetooth ayisebenzi Windows 10 -ingcebiso
Windows Explorer: Bonisa umendo opheleleyo kwibar yomxholo
0x80300024 umyalezo wemposiso ngexesha Windows 10 ufakelo
Ibha yokukhangela bonisa kwaye ufihle indawo yokukhangela ngaphakathi Windows 10
gqiba Windows windows 10